बाबुरामको सुझाव : ‘विप्लवसँग जोरी नखोज, वार्ताबाटै समाधान खोज’ — Newskoseli
बाबुरामको सुझाव : ‘विप्लवसँग जोरी नखोज, वार्ताबाटै समाधान खोज’
गोरखा, २५ फागुन ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले जोरी खोज्ने काम नगरी वार्ता गरेर समाधान खोज्न नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
गोरखा सदरमुकाममा शनिबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले पछिल्लो समय विद्रोहको नेतृत्व गरेको भन्दै सो पार्टीलाई वार्ताबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । तराई विखण्डनको आन्दोलनमा लागेका सीके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याएकै हो भने विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि छलफल र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीका माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने– ‘देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग त उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने विप्लवहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।’ यद्यपि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले अघि बढाएका राजनीतिक एजेन्डासँग आफ्नो सहमति हुन नसक्ने र विप्लवले लिएको बाटो गलत भएको डा. भट्टराईले बताए ।
‘सरकार सीके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लवप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन’– डा. भट्टराईले भने । सरकारले सीके राउतसँग गरिएका सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लागेकाले त्यसलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक असन्तुष्टि राख्नेलाई बोलाएर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ डा. भट्टराईले भने– ‘देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेसँग भने सरकार सचेत हुनुपर्छ ।’ रासस